ဒီရက်ပိုင်းတွေထဲမှာ နှလုံးသားရောဦးနှောက်ကပါ ကဗျာတွေသိပ်ပြီးထွက်မကျလာတတ်လို့
တော့ဘူးလို့တွေးနေမိတုန်းမှာဘဲ ”ဗြုန်း”ကနဲစီပုံးထဲမှာတွေ့လိုက်ရတာက ”ကိုယ့်ကိုကိုယ်
မုန်းတဲ့အကြောင်း၁၀ချက်”တဲ့ ဘရားသား ကိုရန်အောင်လာ Tag သွားတာပေါ့..
ပို့စ်ဖြစ်နေမလားဘဲ..မတတ်နိူင်ဘူး ခင်မင်ရင်းနှီးလို့ ကျွေးတဲ့အစားဆိုတော့သေဆေးဆိုရင်
Analyze လုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့လေ..ကျေးဇူးပါ ဘရားသားရေ…..
အိမ်အတွက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုဝယ်လာရင် အိမ်ထဲမှာချထားလိုက်ရင် ကိုယ့်ကိစ္စကငြိမ်းပြီ.ကျန်တဲ့
လာပြီးရင် ကိုယ်ကဒီအတိုင်းဘဲ Packing မဖောက်ဘဲအိမ်ထဲမှာချထားလိုက်တယ်.နောက်ဆုံး
သူကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့တခြား Topic ပြောင်းပြောဘာလားလို့ဆိုရင်ဆို…
မှန်းသိရက်နဲ့ဒီနေ့ထက်ထိမပြောင်းလဲနိူင်သေးတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မုန်းတဲ့”မဟာအမုန်း”
ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေနဲ့ ဟန်မဆောင်တတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စရိုက်တွေက ဒီနေ့ထက်တိုင်
ကိုယ့်ကိုကိုယ်မုန်းစေတဲ့ ”မဟာအမုန်း” အမှတ်စဉ်သုံးဖြစ်လာခဲ့တယ်….
Green Card လျှောက်.ဟော…ငါးနှစ်လည်းကြာရောနိူင်ငံသားတွေဘာတွေလျှောက်ပြီး
US Citizen တွေတောင်ဖြစ်ကုန်ကြပြီ..ကိုယ်ကကိုယ့်ရဲ့တလွဲခေါင်းမာမှုနဲ့ဘာမှ
မလျှောက်ဘဲနေလာလိုက်တာ ၇နှစ်ကျော်လောက်ကြာမှ ၂၀၀၇နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာမှ
Green Card လျှောက်ဖြစ်တယ်.
ဘူး.ဒီခေါင်းမာမှုတွေကဘဲကိုယ့်ကိုကိုယ်မုန်းလာမိတဲ့ ”မဟာအမုန်း” အမှတ်စဉ်လေး
ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲဝင်သွားရင် ကိုယ့်အတွက်အသုံးတဲ့မလား ကိုယ်တကယ်သုံးဖို့လိုအပ်သ
ပိုပြီးနှစ်သက်လေ့ရှိတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဗီဇကြောင့် အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင်ဝေးဝေးရှောင်လေ့ရှိပါတယ်.
တစ်ယောက်တည်းထိုင်ပြီးကဗျာရေးနေတဲ့အချိန် ဒါမှမဟုတ်စာရေးနေတဲ့အချိန်မှာ အနားကို
တက်ခဲ့တဲ့သက်တမ်းမှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မှမရှိခဲ့ရလောက်အောင်ကို ကိုယ်ကသိပ်ကို
တစ်ခုဖြစ်နိူင်တယ်ဆိုတာကိုသိရက်နဲ့ ဒီနေ့ထက်ထိ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မပြုပြင်နိူ်င်ခဲ့သေးပါဘူး.
ကိုယ့်ကိုကိုယ်မပြုပြင်နိူ်င်သေးတဲ့ ”တသီးပုဂ္ဂလသိပ်ဆန်မှု” ဟာမိမိကိုယ်မိမိမုန်းစေတဲ့ ”မဟာ
အမုန်း” အမှတ်စဉ် ၇ ဘဲဖြစ်ပါတယ်…..
ရှိသွားပြီမဟုတ်လား….စာကရေးရင်းနဲ့အပေါ် ၇ ချက်မှာကိုသိပ်ရှည်နေပြီဆိုတော့ စာဖတ်တဲ့
ကိုယ်က သီချင်းနားထောင်ရင်တောင်မှ အလွမ်းအဆွေးသီချင်းတွေကိုပိုနားထောင်တတ်
ပါတယ်…ဥပမာ ဝိုင်ဝိုင်းရဲ့ ”အိမ်လွမ်းသူ” တို့ ”အချစ်မဲ့ဂစ်တာ” တို့လိုသီချင်းမျိုးတွေပေါ့…
ငယ်ငယ်ကဆိုရင် အိမ်ကိုဧည့်သည်လာပြီးပြန်သွားရင် တော်တော်နဲ့လွမ်းလို့မဆုံးတတ်
တဲ့သူပါ….ဒီလွမ်းဆွေးတတ်မှုတွေက ကိုယ့်စိတ်ကိုဖိဆီးတတ်လွန်းလို့ဘဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်
မုန်းတီးတဲ့ ”မဟာအမုန်း”မှာ လွမ်းဆွေးတတ်ခြင်းကို အမှတ်စဉ်ကိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ချင်
အစားအသောက် အနေအထိုင် အဝတ်အစား အရာအားလုံးမှာ ကိုယ်ကသိပ်ကိုဇီဇာကြောင်
ကဲ…ကိုယ့်ကိုကိုယ်မုန်းမိတဲ့အချက် ၁၀ ချက်ကတော့ပြည့်သွားပြီ..ဘာကျန်သေးသလဲ
(၆) ကိုလူလ တို့ဘဲဖြစ်ကြပါတယ်…..။
Posted by ဆောင်းယွန်းလ at 11:32 PM
ကိုဆောင်းယွန်းလ ရဲ့..၁၀ ချက် ဖတ်ပြီး- အမျိုးသမီးက..ခုံဆင်ပေးတယ်ဆိုလို့.. ပြုံးမိသွားတယ်။
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကဗျာဆရာတွေဆိုတော့..လွမ်းနေရတာ.. မအားဘူးလေ။ ( နောက်တာနော်- )း)
ခုတစ်လော ကိုယ့်ကိုယ်ကို မုန်းတဲ့ လူတွေ တော်တော်များတာပါပဲလား....
ဘလော့တိုင်းမှာကို အပြိုင်မုန်းနေကြတယ်.... ဟီး..ဟီး
သမီးအတွက် citizen ယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်
ဘာတွေတူလဲ... မပြောတော့ဘူး.. ညီရေ့...း)
ကိုဆောင်း ...မအားလွန်းလို့ လာအော်မှပဲ သိတော့တယ် အနုပညာသမားခြင်းဆိုတော့ တူတာတွေလဲ ရှိလား? ရှိရဲ့...ရေးဖြစ်မှာပါ၊ ဘာပဲပြောပြော ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကိုယ်ဆောက်တည်ပြီးပြီမို့ သားသမီးတွေ အတွက် အလေးထားရမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ တာဝန် မဟုတ်လား ? လေးစားပါတယ်။
ကိုဆောင်းက ကျနော့်ကိုထိပ်ဆုံးကနေ တဂ်ထားတာကိုး..။ ကိုဆောင်းပြောသလို ခင်မင်ရင်းနှီးလို့ကျွေးရင် သေဆေးတောင်စားရမယ်ဆိုတော့လည်း။ ရေးရတော့မှာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ကိုဆောင်းနဲ့ ကျနော်နဲ့က အားလုံးနီးနီးကို တူနေတာ ခက်တယ်ဗျ..။ မတူတာလေးတွေ ဖျစ်ညှစ်ထုတ်ပြီး ဆယ်ချက်ပြည့်အောင်စုရတော့မှာပေါ့လေ..။
ကိုဆောင်းရေ စာလာဖတ်သွားပါတယ် အကို။
နံပါတ် (၁) နဲ့ (၂) နဲ့ကို သိပ်ပြောစရာမရှိပေမယ့် နံပါတ်(၃) ကတော့ ဟက်တ်ထိတယ်ဗျာ.
ဟုတ်တယ်. ကျွန်တော်လည်း အဲလိုပဲဗျ. တစ်ခါတစ်လေ ပို့စ်တစ်ခုခုကို ဈာန်ဝင်ပြီး ရေးလိုက်ရရင်၊ အလွမ်းပို့စ်လည်း ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့
မျက်ရည်တွေကိုရွှဲသွားရောဗျ. အဲဒီ့လို.. တစ်ခါတစ်လေ ကီးဘုတ်ပေါ်ကို မျက်ရည်ကျပြီး ရှော့ခ်တွေဖြစ်မှာစိုးလို့ ပလတ်စတစ်အကြည်ပြားလေးတောင် ကီးဘုတ်ပေါ် အုပ်ထားရတယ်. ဟတ်ဟတ်.. (စတာပါ ဘရားသားရာ. ကျွန်တော်က အတည်တစ်ဝက် အပြောင် သုံးဝက်လောက် ပါတတ်တယ်ဗျ. သည်းခံ)
အဲဒီ့ နံပါတ်(၃) က ကဗျာဆရာတွေကို ဖြစ်စေတဲ့ တွန်းအားပေးခံစားချက်တစ်ခုများလားမသိဘူးဗျာ. နော်. တကယ်ကို မသိဘူး. ဒါပေမယ့် ခံစားလွယ်တယ်. ကျွန်တော် ကိုဆောင်းကို အပြင်မှာ တွေ့လိုက်ရရင် 'ကိုဆောင်းးးးးးးးးး' ဆိုပြီး ဖက်ပြီး မငိုပါဘူး. ရယ်မှာပေါ့ဗျာ. :)
(၄) နဲ့ (၅) ကို ရေးထားတာကလည်း တကယ့်ကို ပွင့်လင်းရိုးသားတယ်. လေးစားတယ်ဗျာ. လူအထင်ကြီးအောင် မရေးဘဲ စိတ်ထဲအရှိအရှိအတိုင်း ချရေးသွားတဲ့အတွက် ကိုဆောင်းရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို ထင်းခနဲ မြင်လိုက်ရတယ်.
(၆) ကိုတော့ ခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခုလို့ မြင်တယ်ဗျ. ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း သိပ်ပြီးတော့ အငြိုးအတေး အမှတ်သည်းခြေ မထားတတ်တဲ့ သဘောထားကြီးတဲ့ သဘာဝတစ်ခုပေါ့ဗျာ... (ဘာကျွေးမှာလဲ.. လာချင်ရင် အနီးလေးဗျ. နော်. ရွှတ်ခနဲပဲ.)
(၇) ကလည်း ကဗျာဆရာ၊ အနုပညာသမားတစ်ယောက်ရဲ့ One of the Characters ပါပဲဗျာ. ဟုတ်တယ်ဗျ. (၈) ကိုတော့ လျှို့ဝှက်ထားပေတော့.
(၉) ကလည်းကျွန်တော်နဲ့ လာတူတယ်. ကျွန်တော်လည်း ကိုငှက်ကြီးရဲ့ အမေ့အိမ်တို့၊ ၀ိုင်ဝိုင်းရဲ့ အိမ်လွမ်းသူတို့၊ ဆောင်းဦးလှိုင်ရဲ့ အရိပ်စစ်တို့ ကြားလိုက်ရရင် လူက ငိုင်သွားရောဗျာ.
(၁၀) အ၀တ်အစားဇီဇာမကြောင်အောင် တီရှပ်တွေသာ ၀တ်၊ ဘရားသားရေ... :) အဲဒါမှ ပိုဆိုးရော. ကျွန်တော်မပါဘူးနော် လို့ မဒမ်ဆောင်း ကိုပြောလိုက်ပါဦး...
ခုလိုမျိုး ခင်မင်ရင်းနှီးစွာနဲ့ အရေးတယူ ရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ.
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းလှတဲ့ မိသားစုဘ၀လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီး ကိုဆောင်းချစ်တဲ့ ကဗျာလှလှလေးတွေ ဆက်လက်ရေးသားပြုစုနိုင်ပါစေ..
သာဓု.. သာဓု... အဲလေ.. ယောင်ကုန်ပြီ.. :)
တစ် နဲ့ ငါး နဲ့ တူ တယ် ကိုဆောင်းယွန်း ...